उत्तर कोरियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सर्वसम्मत रुपमा नाकाबन्दी, के असर पार्छ नाकाबन्दीले ? « Tulsipur Khabar
उत्तर कोरियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सर्वसम्मत रुपमा नाकाबन्दी, के असर पार्छ नाकाबन्दीले ?
यो नाकाबन्दीले उत्तर कोरियालाई उसका नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने काममा पनि रोक लगाएको छ । यस नयाँ नाकाबन्दीपछि अब उसका कामदारले बिदेशमा गएर रोजगारी पाउने छैनन् । यसबाट उत्तर कोरियाका ठूलो सङ्ख्याका नागरिक प्रभावित हुनेछन् । यो नाकाबन्दी लगाएपछि कुनै पनि देशले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई बैधानिक रुपमा काममा लगाउन पाइने छैन ।
उत्तर कोरियाले गरेको पछिल्लो आणविक परीक्षणपछि चीनले विरोध गर्दै सो प्रतिक्रिया दिएको थियो । चीनले पनि उक्त आणविक परीक्षणको विरोधगर्दै आएको छ । उहाँले चीनमा केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो– कोरियाली प्रायद्वीपमा नयाँ केही गरियोस र यस्तो आवश्यक कारबाहीमा चीनको समर्थन रहने छ ।
उत्तर कोरियामाथि विभिन्न देश र संघसंस्थाले थप नाकाबन्दी तथा कारबाहीको घोषणागर्ने जनाएका छन् । सो आणविक परीक्षणको विरोध गर्दै आएको युरोपियन युनियनले पनि उसका विरुद्ध नाकाबन्दीको तयारी गरेको हो । राजधानीबाट
प्रकाशित मिति : २०७४ भाद्र २७ गते मङ्गलवार
अमेरिकामा कोभिड खोप लगाउनेलाई प्रतिव्यक्ति सय डलर
अफगानिस्तानमा बाढीमा परी ६० जनाको मृत्यु
विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२ लाख नाघ्यो ।।
भारतमा ४३ हजार बढिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि